राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री खतिवडासहित १८ जना सांसदको कार्यकाल सकियो को–को हुँदैछन् बिदा ? (नामसहित) | Nepal Ghatana
राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री खतिवडासहित १८ जना सांसदको कार्यकाल सकियो को–को हुँदैछन् बिदा ? (नामसहित)
प्रकाशित : २० फाल्गुन २०७६, मंगलवार १४:११
राष्ट्रियसभाको दुईवर्षको कार्यकाल पूरा गरेर १८ जना राष्ट्रियसभाका सांसदहरु बिदा हुँदैछन् ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल पनि आजबाटै सकिँदैछ । खतिवडासहित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी दलका गरी १८ जना सांसदको पदावधि सकिँदैछ ।
खतिवडा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका थिए । यद्यपी अर्थमन्त्री खतिवडाको पदावधि थप्ने सरकारको तयारी छ ।
उनी मंगलबारदेखि सांसद नभइ मन्त्रीमात्रै रहनेछन् । सांसद नहुँदा पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । उनी राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सिटमा सांसद भएका हुन् ।
कार्यकाल सकिनेहरुमा नेकपाका ८, कांग्रेसका ६, राजपाका २, समाजवादीको १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एकजना सांसद् छन् ।
कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, सचेतक सरिता प्रसाईसहित विन्दादेवी आले, बद्री पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव र धनकुमारी खतिवडाको कार्यकाल सकिँदैछ ।
राष्ट्रियसभाको बैठक दुई बजे बस्दैछ । त्यसअघि आज बिदा हुने सांसदहरुको सामूहिक तस्बिर खिच्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । नयाँ निर्वा्चित सांसदहरुको भने बुधबार ११ बजे सपथग्रहण हुने भएको छ ।